Ao amin'ny Actualidad iPhone dia entinay mihoatra ny 10 taona mitatitra isan'andro momba ny zava-drehetra mifandraika amin'ny Apple, amin'ny endrika vaovao, fampianarana, famakafakana, hevitra, fampiharana, fiarovana ary more tsy manadino ny fitadiavana tanjona, izay namela antsika ho tonga iray amin'ireo bilaogy miteny espaniola be mpamaky indrindra mifandraika amin'i Apple.
Ny ekipa Actualidad iPhone dia misy ekipa iray an'ny mpanonta manana traikefa betsaka amin'ny vokatra Apple. Raha ny marina dia maro amintsika no manohy mitazona ny iPhone voalohany toy ny volamena amin'ny lamba. Ao amin'ny bilaoginay dia afaka mahita vahaolana amin'ny olana rehetra ianao, hafahafa toa izany, amin'ny alàlan'ny fizarana fampianarana anay. Raha tsy hitanao izany dia azonao atao ny mifandray amin'ny iray aminay mba hiarahanay mitady hitady vahaolana.
Azonao atao koa ny mahita ny fandalinana feno, amin'ny alàlan'ny fantsona YouTube anay, momba ireo vokatra rehetra apetrak'i Apple eny an-tsena isan-taona. Ho fanampin'izany, izahay koa dia mamakafaka ireo fandefasana ireo terminal manan-danja indrindra amin'ny fifaninanana mivantana avy amin'i Apple, manao fampitahana sy fandinihana isaky ny teboka ireo tombony sy fatiantoka ... tsy manary tsy fizahan-tavan'olona amin'ny fotoana rehetra.
Ny ekipa fanontana an'ny Actualidad iPhone dia misy vondrona iray Manam-pahaizana iPhone avy amin'ny Apple.
Raha te ho anisan'ny ekipa iPhone Actualidad ianao, fenoy ity takelaka ity
Bachelor of Medicine and Pediatrician amin'ny fiantsoana. Mpampiasa Apple hatramin'ny 2005, rehefa nividy iPod nano voalohany aho. Nanomboka teo dia nandalo ny tanako ny karazana iPhone, iPad, Mac, AirPod, Apple Watch ... Amin'ny safidy na ilaina, dia nianatra ny zavatra fantatro rehetra aho tamin'ny famakiana ora, fijerena sy fihainoana ireo karazana atiny mifandraika amin'izany. miaraka amin'i Apple, ary izany no antony tiako hizarana ny zavatra niainako tao amin'ny bilaogy, tao amin'ny fantsona YouTube ary tao amin'ny Podcast.
Ny fidirako voalohany amin'ny tontolon'ny Apple dia amin'ny alàlan'ny MacBook, ny "fotsy". Fotoana fohy taorian'izay dia nividy iPod Classic 40GB aho. Tamin'ny taona 2008 vao nanao ny dingana tamin'ny iPhone aho tamin'ny maodely voalohany navoakan'i Apple, izay nahatonga ahy hanadino ny momba ny PDA. Nanoratra vaovao iPhone nandritra ny 10 taona mahery aho. Tiako foana ny mizara ny fahalalako sy ny fomba tsara kokoa noho ny Actualidad iPhone afaka mahavita azy.
Tonian-dahatsoratra, geek ary tia ny "culture" Apple. Araka ny nolazain'i Steve Jobs: "Ny endrika dia tsy endrika ivelany fotsiny, fa ny endrika no fomba fiasa." Tamin'ny 2012 ny iPhone voalohany dia latsaka am-pelatanako ary nanomboka teo dia tsy nisy paoma nanohitra ahy. Famakafakana, fanandramana ary fahitana hatrany amin'ny fomba fijery mitsikera izay omen'i Apple antsika roa eo amin'ny sehatry ny fitaovana sy ny lozisialy. Lavitra ny maha "fanboy" an'i Apple dia tiako ny milaza aminao ny fahombiazana, saingy tiako kokoa ireo lesoka. Hita ao amin'ny Twitter toy ny @ miguel_h91 ary amin'ny Instagram as @ MH.Geek.
Tena tiako ny zavatra rehetra mifandray amin'ny teknolojia sy ny karazana fanatanjahan-tena. Nanomboka izany tamin'ny Apple aho taona maro lasa izay niaraka tamin'ny iPod Classic - na iza na iza tsy nanana na iza na iza nanangana ny tanany - teo aloha dia efa nanenjika ireo gadget teknolojia rehetra azony natao izy. Ny zavatra niainako niaraka tamin'i Apple dia be dia be fa vonona hianatra zavatra vaovao foana ianao. Eto amin'ity tontolo ity dia mandroso haingana tokoa ny teknolojia ary miaraka amin'i Apple dia tsy misy ankanavaka izany. Hatramin'ny 2009, rehefa tonga teo am-pelatanako ny iPod iPod 120GB, nifoha ny fahalianako tamin'i Apple ary ny manaraka dia ny iPhone 4, iPhone izay tsy nifamatotra intsony tamin'ny fifanarahana tamin'i Movistar ary hatreto dia saika taona mandeha amin'ny maodely vaovao aho. Ny traikefa eto dia ny zava-drehetra ary tao anatin'ny 12 taona mahery izay niarahako tamin'ny vokatra Apple dia afaka milaza aho fa azo avy amin'ny ora sy ora maro ny fahalalako. Amin'ny fotoam-pialan-tsasatra ataoko, saingy tsy afaka mandeha lavitra loatra amin'ny iPhone sy Mac aho. Ho hitanao amin'ny Twitter aho toy ny @jordi_sdmac
Mahaliana ny teknolojia sy ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny Apple. Ny iPod Touch no fitaovana voalohany avy amin'ny Big Apple izay nandalo teny an-tanako. Avy eo dia narahina andian-taranaka maro an'ny iPads, iPhone 5, iPhon 6S Plus ... Miara-miasa amin'ny fitaovana, mamaky zavatra betsaka ary mampiofana ao amin'ny Apple ary ny maha-izy azy amin'ny maha orinasa ahy dia nanome ahy traikefa ampy hilazana ny atiny sy ny atiny. Vokatra Apple nandritra ny taona vitsivitsy izao.
Salama! Nanomboka teo amin'ny tontolon'ny Apple tamin'ny iPod Shuffle aho, nahafinaritra ny zava-drehetra, ny mety hahagaga anao anao amin'ireo hira sendra nampidirinao tao amin'ny iTunes playlist. Avy eo dia tonga ny iPod Nano, iPod Classic, ary ny iPhone 4 ... Nahasarika ny tontolo iainana Cupertino, hitako ny toerako ao amin'ny Actualidad iPad, taorian'izany dia nanao ny dingana haingana izahay ho an'ny Actualidad iPhone miaraka amina ekipa lehibe iray izay ifampizarako ilay " hafahafa "an'i Cupertino, ary mbola anohizako mianatra isan'andro. Mampiato? Eny, fa miaraka amin'ny gadget Apple 😉
Apple dia mamorona fitaovana hanamorana ny fiainantsika. Fa izao tontolo izao tsy mitsaha-mivoatra, ary tiako ho vaovao hatrany. Faly aho fa mianatra sy mampihatra traikefa vaovao amin'ny manzanitas ary mizara izany amin'ny mpamaky. Nitsatoka tamin'izao rehetra izao noforonin'i Jobs, hatramin'ny namonjen'i Apple Watch ny fiainako.
Teraka tany Madrid ary injenieran'ny fifandraisan-davitra. Tiako ny teknolojia ary indrindra izay rehetra mifandraika amin'i Apple. Hatramin'ny nivoahan'ny iPod sy ny iPhone taty aoriana dia nifanaritaka tamin'ny tontolon'ny Apple aho, nanamboatra sy nahita ny fomba handaminana ekosistia iray manontolo izay ahafahan'ny rehetra mampifandray.
Mpahay maritrano sy geek, liana amin'ny Internet, ny haitao vaovao ary ny tontolon'ny Apple. Manoratra sy mianatra tsy tapaka momba ny fivoaran'ny iPhone sy izay rehetra mifandraika amin'ity marika ity aho, izay soratako mandrakariva.
Mpanao gazety manam-pahaizana manokana amin'ny iPhone. Mitety an'izao tontolo izao aho mahita fitaovana vaovao amin'ity marika lehibe ity, izay ahafahana manao zavatra mahatalanjona ary manana fiainana mora kokoa.
Louis de la Boat
Mazoto mianatra sy mampianatra foana. Tiako ny mitatitra ny zavatra fantatro rehetra, ary ity, nanampy ny zava-misy fa amin'ny iPhone foana aho dia manampy ahy hampita tsara kokoa ny vaovaon'ity marika ity.
Ny fitiavako ny teknolojia dia teraka niaraka tamin'i Apple ary niorim-paka tato amiko taona vitsivitsy lasa izay ary ankehitriny tsy afaka mitsahatra mianatra sy maniry bebe kokoa aho. Noho io antony io dia manoratra aho mba hampahafantatra momba ny vaovao tsara indrindra amin'ny iPhone sy ireo fitaovana hafa an'ny marika miaraka amin'ny zavatra niainako sy ny fahalalako.
Mampihetsi-po ahy ny fitiavana ny haitao Apple, marika iray ananako traikefa lehibe, na amin'ny fampiasana fitaovana na amin'ny antontan-taratasy momba ny vokatra toa ny iPhone. Vaovao foana aho manoratra ny tatitra tsara indrindra sy ny vaovao.
Mpahay siansa informatika, mpampiasa iOS hatramin'ny nanombohany ary mpampiasa Mac nandritra ny dimy taona mahery. Tiako ny mandeha, fa miaraka amin'ny iPhone-ko foana ny manao tatitra amin'ny fomba henjana indrindra azo atao, ary maka ny sary tsara indrindra azo alaina amin'ny smartphone.
Tia teknolojia vaovao, ary mpampiasa iOS sy OSX. Mazava ho azy, mpankafy an'i Apple aho, ary izany no antony anoratako ato amin'ity magazine ity mba hahafantaran'ny mpamaky ny vaovao iPhone tsara indrindra.
Lehilahy iray tia ny tontolon'ny Apple aho. Tiako ny mianatra raha mbola momba ny lohahevitra tiako na zava-dehibe io. Noho izany, amin'ny lahatsoratro dia ho hitanao ireo zavatra izay mety ilaina isan'andro amin'ny iPhone-nao.
Mafana fo amin'ny mpanao gadget sy telefaona finday ny mpanao gazety. Fantatro foana ny momba ny iPhone, iPad, Apple Watch ary MacBook Pro, ka ny tanjoko dia ny hahafantaran'ny mpamaky rehetra ny vaovao.